DAAWO VIDEO:DEG DEG Ninkii Caaisha Ilyaas Kufsaday oo Qirtay Sir Badana Sheegay – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO VIDEO:DEG DEG Ninkii Caaisha Ilyaas Kufsaday oo Qirtay Sir Badana Sheegay
August 17, 2019 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka maanta 3
Ku xigeenka Xeer Ilaaliyaha guud ee dowladda Puntland Maxamed xareed Faarax ayaa maanta oo Sabtiya ku dhawaaqay in ay hay’adaha Amniga Puntland ku amri doonaan in la soo qabto eedaysane kale oo uu galay kiiskii Caa’isha Ilyaas oo hore saddex nin oo keliya loo xukumay.
Daawo:- Musharax Xidig oo ugu baaqay Axmed Madoobe inuu iska diiwaan geliyo gudiga doorashada ee ay dhiseen mucaaradka.
Cudur hoosta io korkaba idinka gel aduunka kusilca aakhirana naar baa idinka horeeysa io ineey idin kahorreeyso godkii!
Kuwan miyay noool yihiiin… in beri hore la toogtay baan u haystay.
Horta arimaha ha lakala ogaado.Dhaar iyo kitaab mudug lagu maro.
Ninkani muxuu hadda wax u qiranayaa?
1- Ujeedadu waa in aan la dilin ee uu ku dhuuntoo badbaadiyo.
Marka hadaanu markii hore wax qiran ee uu maanta lagula soo atliyay inuu sidaa yiraahdo, markhaati ma galo.
2- Tan kale maxkamadu meeqa jeer ayay gaari kartaa, ahdii markii hore arintan la baaray lana xaqiijiyay waa in sharciga sida ugu dhakhsaha badan loo fuliyaa si loogu quus qaato.
3- Dhaartu waxay shaqaynaysaa marka aan lahayn caddayn, marka maantay haraf haraf ma soconayso. Nimanka cusub ee uu kusoo darayna ayagana la wada mariyo sharciga.
Hadaan taasi dhicin meel kale ayay wax gaarayaan.
Arintan waxay u egtahay in talo ninkan lasoo siiyay oo la doonayo in loo raadiyo qiil xabsi uu ku galo.
Kilaab aan jixinjix mudnayn ee na dhaafiya.